Kedu ndụmọdụ iji meziwanye ọdịnaya m SEO?
Nyocha njirimara ọchụchọ na ọdịnaya bụ echiche abụọ jikọrọ ọnụ na-emetụta ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ. Enweghi ike nke ọma ma dị mkpa, saịtị gị nwere ike ịfuru efu na ntinye nke 3 ma ọ bụ ọbụna 10 nke nsonaazụ ọchụchọ ọ bụla na-enweghị usoro okporo ụzọ ọ bụla. Ọ dịghị mkpa ma ị na - eduga ahịa ma ọ bụ blog, ọ dị mkpa ka ị gaa n'ihu na nghọta gị.
Otu n'ime ihe kachasị na ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-eche ihu na ịmepụta mgbasa ozi ahịa bụ ihe dị mkpa iji dee ederede nke kachasị maka search engine ma n'otu oge ahụ na-achọ ka ndị ọrụ nhata. Ihe nwere ike ịgbanwe na ọdịnaya ọdịnaya bụ MUST maka ebe nrụọrụ weebụ nke na-etinye onwe ha dị ka ndị a ma ama na ndị ruru eru na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ ya mere mmekọrịta dị n'etiti njikarịcha search engine na ọdịnaya dị mkpa. N'isiokwu a, ị ga-ahụ ụfọdụ usoro SEO copywriting nke nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị anya na nchọnchọ ọchụchọ.
SEO Atụmatụ ọdịnaya
Mepụta ọdịnaya gị maka ndị na-ege gị ntị
bụ nọmba SEO dị mkpa ịchọrọ iji tụlee mgbe ị na-ekepụta ọdịnaya gị. Ịkwesịrị ịchọta ọdịnaya nke na-arịọ maka ọdịmma ndị ahịa gị. Ihe omuma gi kwesiri inyere ndi oru aka idozi nsogbu ha ma mezuo mkpa ha. Ọ pụtaghị na gị niile posts kwesịrị itinye na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Otú ọ dị, ha niile kwesịrị ịbụ ụlọ ọrụ metụtara. Ikwesiri igosi na gi onwe gi bu onye okachamara n'ilere gi n'enye ndi na-aguta gi ihe omuma na ihe omuma. Site na ime nke a, ị ga-enweta ndị debanyere aha ọhụrụ ga-abịaghachi maka nkọwa ndị ọzọ.
Mee ezigbo echiche
Cheedị na ndị ahịa gị nwere ike ịgbaso saịtị gị site na nsonaazụ ọchụchọ. Ikwesiri ime ka ha kwenye ka ha nọrọ na ya ma obu bu omimi maka ozi ndi ozo. Ọrụ mbụ gị bụ ịkwado onye ahịa na saịtị gị site na itinye ha na ogo na ọdịnaya bara uru. Ma ọ bụghị ya, onye ahịa gị nwere ike ịpịpụ ma weghachite ọnụọgụ ego gị. N'okwu ya, ọnụego elu ọnụahịa ga-eme ka ọnọdụ ogo. Ndị ọrụ ga-ama onye ha na-emekọrịta ihe. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nye ha ozi niile dị mkpa banyere ngwaahịa gị na ọrụ gị ebe ị ga-eche n'echiche onwe gị. Jide n'aka na ị mejuputa usoro ntinye oru iji zipu ndi oru. Ọzọkwa, ịkwesịrị iji ọdịnaya gị mezie foto gị azụmahịa.
Ịgba mma mara mma
Ikọ akụkọ gị dị ka nlele ihu na kọntaktị mbụ. Ọ bụ ihe mbụ ndị ọrụ nwere ike ịtụle. Ọ bụ ya mere isi akụkọ gị kwesịrị iji dị mma ma mara mma. Ịkwesịrị ịgụnye usoro ọchụchọ kachasị na-ebugharị na ịkọwapụta gị iji mee ka ha hụ maka crawlers. I nwere ihe odide 60 iji gosi ihe kachasị mkpa gbasara azụmahịa gị. Na mgbakwunye na isiokwu mara mma na nke kachasị mma, jide n'aka na nkọwa gị dị atọ na-arụ ọrụ, dị mkpa ma kọwakwuo ya na isi okwu nke ọdịnaya ahụ.
Mpempe okwu mkpokọta-okwu
Iji mee ka ọdịnaya gị dị ma ndị ọrụ ma chọọ bots, jide n'aka na ị na-eji ihe dị mkpa nye azụmahịa gị na iji nweta ọchụchọ ọchụchọ. Ịkwesịrị ime ha na ebe ziri ezi dị ka utu aha, metadata, akara ALT, URL na site na ọdịnaya ebe ọ dị anya. Ị kwesịrị ịma na engines ọchụchọ na-enyocha àgwà na uru nke isiokwu gị kama ịdị ukwuu ha. Ọ bụ ya mere i kwesịghị iji ihe ọchụchọ chọpụta ọdịnaya gị Source .